घर अमेरिकी फुटबल स्टोरीहरू ब्राजिलियन फुटबल खेलाडीहरू यसका लागि उनीहरुसँगको सम्बन्ध छ
LB एक फुटबल जीनियसको कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनामले सबैभन्दा राम्रोसँग परिचित छ "श्री विश्वसनीय"। हाम्रो फेबिन्हो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
विश्लेषणमा प्रसिद्धी, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र अन्य धेरै अफ-पिच तथ्यहरू (थोरै ज्ञात) अघि उनको जीवनको कथा समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ एक भरपर्दो मिडफिल्डर हुनुहुन्छ। जहाँसम्म, केवल केहि थोरैले फेबिन्होको बायोलाई विचार गर्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
फाबिन्हो बाल्यकाल कहानी - प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन:
सुरू गरेर, त्यहाँ कुनै Fابिनो अवस्थित छ आफ्ना आमा-बुबा द्वारा उसलाई दिईएको नाममा। तसर्थ, उनको पूरा नाम फेबियो हेनरिक टेवारिस हो। फाबिन्हो वा श्री विश्वसनीय, उनी चिनिन्छन् जुन अक्टोबर १ 23 1993 Day को २ Brazil औं दिन गाढा ब्राजिलकी आमा रोसांगेला टाभरेस (पूर्व सफाकर्ता) र गोरा ब्राजिलियन बुबा जोओ रोबर्टो टाभरेस (कारखाना मजदुर) को ब्राजिलको साम्पाओलो, ब्राजिलका कैम्पिनासमा जन्म भएको थियो। । चित्रित उनका प्यारा आमाबुबा तल चित्रित छन्।
फाबिन्हो एक लजालु बच्चा र तीन बच्चाहरु मध्ये कान्छो कान्छीको रुपमा जन्मेको थियो। टाभरेस परिवारको अन्तिम जन्मेको बच्चाको रूपमा, फेबिन्हो धेरै प्याम्पर्ड थिए। उनी ब्राजिलको सुन्दर शहर क्याम्पिनासमा ठूला भाइबहिनीहरूसँग हुर्केका थिए जुन यसको घाँस मैदान र अनौठो परिदृश्यका लागि परिचित छ जुन फुटबल खेल्ने मनपराउँदछ।
Fabinho को लागि, केहि चीज उनको बचपन को समय को समयमा निश्चित थियो। लगभग हरेक सानो केटा उनको बचपनको समयको दौडान एक पेशेवर फुटबलर बन्न पुगे। त्यसोभए उनीहरूको लागि खालीपनको अन्त्यमा फेबिनो सहित उनीहरूको खुट्टामा फुटबल थियो।
फाबिन्हो अनटोल्ड जीवनी तथ्य - क्यारियर शुरू:
फाबिनोले 7. बर्षको उमेरमा स्कूलमा प्रतिस्पर्धी फुटबल खेल्न शुरू गरे। स्कूल पछि, उनले आफ्नो स्थानीय युवा टीम, पाउलोनिया एफसीसँग फुटबल खेले। तल चित्रित उसको साथी साथीहरु संग एक जवान Finnho छ।
Fabinho को शुरुवात चुपचाप को निर्धारण को लागि मनाया गएको थियो। पावलले एरिक मार्टिनको प्रशिक्षकले आफ्नो समर्पण, प्रतिबद्धता, अनुशासन र सामरिक दृढताहरूलाई सङ्केत गरे जब यो जोडियो। आफ्नो आमाबाबु पनि आफ्नो पिता रबर्टोलाई आश्वासन दिनुहुन्छ कि, प्रारम्भिक उमेरबाट, उनको छोराले फुटबललाई प्राथमिकता दिन्छन्। दुवै स्कूल र उनको स्थानीय युवा क्लबमा, सबैले भने कि तिनको प्रतिभा थियो, उनी सधैं एक बहुमुखी खेलाडीको बलियो किक र कौशल थियो।
त्यसको लगत्तै, फेबिनोले फुटसल फुटबलको अभ्यास गर्न शुरू गरे जुन उसले १२ वर्षको उमेरसम्म गरेको थियो अधिक पेशेवर हुने विचार गर्नु अघि। उनको पहिलो व्यावसायिक परीक्षण फ्लुमिनान्स युवा प्रणालीको साथ थियो।
Fabinho जीवनी तथ्य - क्यारियर शुरू:
फबिनोहोको उत्कट चाहनाले उनलाई सफल परिक्षण पछि फ्लुमेनसेन स्थानीय युवा टोलीको रोस्टरमा दर्ता गर्‍यो, जसले उसलाई आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्न मञ्च प्रदान गर्‍यो।
युवा क्लबमा, फिबिनोले सामना गरेको थियो मार्सेलो जो क्लब युवा युवा पक्ष मा थियो। अरू ब्राजिलियनहरू मध्ये एक थियो रिचर्लासन उनी आफ्नो जूनियर थिए।
युवावस्थामा बिताएपछि, क्लबमा सबै युवाहरूको माथिल्लो स्तरमा उक्लदै फाबिनोलाई २० मे २०१२ मा पहिलो टोलीमा बोलाइएको थियो। किनभने उनी निकै राम्रो थिए, फेबिनहो ब्राजिलमा पोर्चुगलमा रियो अवेको लागि खेल्न जाँदा बिरलै ब्राजिलमा चित्रित भएका थिए। । युरोपमा खेल्न कल गरेको उनको खातामा, उनको बुबाले भने;
“अन्ततः परमेश्वरले उसको प्रयासलाई आशिष्‌ दिनुभयो र एउटा राम्रो युवा क्लबलाई उसको मार्गमा राख्नुभयो। मेरो छोराको प्रतिभा छ, उसले फुटबल खेलाडी हुने सपनाको लागि कडा मेहनत गर्यो र उसले फल फलाउँदैछ ”
फिबिन्होकी आमा रोसेâ्गेला दा सिल्भा तावरेसले युरोपमा आउँदा आफ्नो भावनात्मक कललाई पनि बिर्सिछिन्। उनको खातामा;
“जब उनले युरोपमा फोन गरे पछि बुबासित कुरा गरिरहेको सुन्नुभयो। मैले यो उनको र हामी उनको परिवारको लागि अत्यन्त विशेष भएको देख्यौं। उहाँ धेरै खुसी, स्पर्श र आँसुले भरिएको थियो "
फाबिन्हो अनटोल्ड तथ्यहरू - जोर्गी मेन्डेसको साथ मुठभेड:
पोर्चुगलमा रियो एव संग खेल्दै गर्दा, फेबिनोले पौडेल फुटबल एजेन्सीलाई भेट्टाए, जर्ज मेन्डेस जसले उनको एजेन्ट र करियर सल्लाहकार बने।
Mendes प्रायः पोर्चुगल बोल्ने खेलाडीहरू जस्तै मद्दत गर्नको लागि जिम्मेवार हुन जान्दछ सी रोनाल्डो, Jose Mourinho आदि सबै भन्दा ठूलो क्लबहरूमा प्रगति गर्दछ।
स्मार्ट एजेंट निर्णय: वरिष्ठ खेलाडी भए पनि, फाबिनोलाई उनको सुपर एजेन्टले एक पेशेवर सल्लाह दिए जुन रियल म्याड्रिड कास्टिला (रियल म्याड्रिड टीम बी) मा सम्मिलित हुन्छ जसको उसले कल्पना गरे कि उनी आफ्नो क्यारियरको उत्थानको लागि उत्तम स्प्रिंगबोर्डको रूपमा काम गर्छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले आफ्नो ग्राहक जोसे मोरिन्होमा तथ्य प्रस्तुत गरे जसले रियल मैड्रिडको वरिष्ठ पक्षलाई सम्बोधन गरे, आशा छ कि उनले फाडिनोलाई म्याड्रिड वरिष्ठ टीममा फ्यूज गर्न सहयोग गर्नेछन्।
Fabinho पालन गरे जर्ज मेन्डेस'क्यास्टिला विकास टोलीमा सहभागी हुन चाहानुहुन्छ। उनले म्याड्रिड जुनियर स्तर माथि उठे र म्याड्रिड पहिलो टीम मा प्रवेश गरे जहाँ उनले योजना विफल किनभने Jose Mourinho त्यो अवधि बेकार भयो।
रियाल म्याड्रिडका लागि फिबिन्होको मात्र उपस्थिति मालागाको बिरूद्ध आयो जब उनले प्रदान गरे एन्जिल डि मारिया मद्दतको रूपमा जसले खेलको विजयी गोललाई निम्त्यायो। बर्खास्त हुने धारमा रहेका जोस मोरिन्होले फेबिनोलाई आफूले चाहेको मौका कहिल्यै दिएनन्। उनका ग्राहकलाई चिन्ने जोसे मोरिन्हो स्पेनिस क्लबले बनेको छोड्नेछ जर्ज मेन्डेस मोनकोमा एक ऋणदाताको लागि सहमत भए पछि पछि एक स्थायी सम्झौता भयो।
मोनकोमा, Fabinho उसको सपना साकार गर्न कडा दृढ संकल्प थियो र उसको स्थानमा सबै भन्दा राम्रो बन्नको लागि महत्वाकांक्षालाई पार गर्ने फ्यान्सी थिएन। क्लब मा, उनले आफैलाई राम्रो रक्षात्मक मिडफिल्डरमा राखे जसले क्लबको बीचमा देख्यो मोरिन्होको उनको अधिग्रहणको लागि मैनचेस्टर संयुक्त लडाइँ। तिनले अस्वीकार गरे Mourinhoयुनाइटेड र लिभरपूल गए। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
फेबिन्हो, रेबेका टाभरेस प्रेम जीवन:
हरेक सफल ब्राजिलियन फुटबलर पछाडि, एक महान महिला, वा यस्तै भनाइ छ। एक फाबिनो पछाडि, त्यहाँ एक ग्लैमरस प्रेमिका गरिएको छ जो हाल उनकी श्रीमती हो। रेबेका टाभरेस, आफ्नो जीवनको प्रेमले चित्रण गरीएको छ फिबिन्होकी पत्नी।
फाबिन्ह्हो र उनको सदा ग्लैमरस पत्नी रेबेका तावरस। २०१ 2015 मा पहिलो पटक भेटे पछि रेबेकाले फेबिनोसँग विवाह गरे। दुबै प्रेमीहरूले उनीहरूको प्रेम व्यक्त गर्न र सँगै बिताउनको लागि समय निकाल्ने क्षमताको आनन्द लिए।
घनिष्ठ मित्र र पारिवारिक स्रोतबाट देखा पर्यो, उनीहरूको सम्बन्ध उनीहरूलाई सबैभन्दा राम्रो साथीको स्थितिबाट साँचो प्रेममा लिइन्।
Fabinho यसलाई सम्मान मान्छ कि उनीहरूको पसल जहाँ पनि पसल गर्न चाहन्छ। Fabinho को लागी, किनमेल खरिद गर्दैछ। उहाँको “हामी जान्छौं कि हामी जान्छौं कि हामी जान्छौं” खरिद गर्ने जीवन शैली होइन संग Rebecca. Rebeca को लागि, त्यहाँ पसल वा दुई हो कि वास्तवमा यसको अर्थ केहि छ
एलेक्स सनरो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
उनको इन्स्टाग्रामका अनुसार रेबेकाले फेबिनोसँग ग्लैमरस जीवन बिताउँछिन्। उनी आफ्नो मानिससँग विदेशी छुट्टीबाट धेरै शटहरू पोस्ट गर्न मनपराउँछिन्। यो न्यू योर्क को हो।
Rebeca सुन्दर श्यामला फैशन को बारे मा भावुक छ र एलिसिया कुञ्जी उनको मूर्ति हो। त्यो उनको मान्छे उसलाई सुन्दर स्केस्केपर्सका साथ स्थानमा लैजान्छ जुन फोटोमा देखाइएको छ।
अरबी मरुभूमिमा छुट्टिहरु बिताउने उनको एकान्तता र प्रकृति को सुन्दरता को लागि धन्यवाद उसको मुटुमा एक विशेष सानो ठाउँ छ। मरुभूमि दुबै प्रेमिकाको लागि विभिन्न गतिविधिहरूको ब्यबचारले भरिएको छ जो साहसिक कार्य गर्न मन पराउँछन्।
वेलेंटाइन दिवस जो जोडीहरु को लागी एक उत्सव देखि अधिक छ, जो एक देखि प्यार गर्दछ कि उनि कितना प्यार गर्छन।
फाबिन्हो अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सोशल मीडिया अज्ञान:
लेखेको समयमा लिभरपूल ट्विटर पृष्ठको १०..10.4 मिलियन अनुयायीहरू छन्। लगभग सबै लिभरपूल खेलाडीहरूले FBIho बाहेक आफ्नै ट्वीटर खाता आफैं सञ्चालन गर्छन्। उनकी श्रीमती रेबेका तावरेसले एक पटक भनेकी थिइन कि उनी ट्विटरमा लिभरपूल फ्यानहरूको फौजसँग कुराकानी गर्न अझ बढी हातहतियार लिने छन् जो ब्राजीलियनसँग अन्तर्क्रिया गर्न उत्सुक छन्।
उनी पनी सार्वजनिक रुपमा उनको पतिको सोशल मीडिया अज्ञात उनको आफ्नै खातामा व्याख्या गर्न गएकी थिइन। उनको शब्दहरूमा;
"र हो, यो मेरो ट्विटर हो। फेबिन्हो मलाई अहिले पछ्याउँदैनन् किनकि ट्विटरले कसरी काम गर्छ भनेर उसलाई थाँहा छैन त्यसैले उसलाई त्यस्तो सहयोग गर्ने कोही छ र हुन सक्छ त्यस व्यक्तिलाई म आफू उसकी श्रीमती हुँ भनेर थाहा छैन। ”
तल ट्वीटर फेला पार्नुहोस्;
लेख्ने क्रममा फेबिन्होसँग हाल 94.4 .XNUMX .kk अनुयायीहरू छन् जुन उनलाई आफैंले ट्विट देख्न सक्दैनन्। ब्राजिलियनका अनुसार ...
“मैले दुई वा तीन अगाडी ट्विटर पाएको थिएँ तर मैले यो ह्याशट्याग वा समाचारहरू मात्र हेर्न प्रयोग गरेको थिएँ। तर मलाई लाग्छ ट्विटर इन्स्टाग्राम भन्दा राम्रो छ प्रशंसकहरूसँग अन्तर्क्रियाको सम्बन्धमा। व्यक्तिगत रूपमा, म इन्स्टाग्राम रुचाउँछु। "
फाबिन्हो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
Fabinho फुटबल मायालु पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँछ। वर्तमानमा इङ्गल्याण्डमा, फेबिनो अहिले हालै आफ्नो बहिनी र भाभीसँग बस्छ जसले आफ्नो फुटबल सम्बन्धको ख्याल राख्दछ। उहाँको सपना भनेको नजिकैको सम्पूर्ण परिवार हो। तथापि, उहाँका आमाबाबुहरू; जोआओ रोबर्टो (बुबा) र रोसाङ्गला (आमा) मायालु प्यारो क्याम्पिनस, ब्राजिलमा बस्न मन पराउँछन्।
उनको मामको अनुसार;
“म धेरै खुसी छु कि मेरी छोरी पनि उहाँसँगै छिन्। हामी प्रत्येक वर्ष जान्छौं र ब्राजिल जानु भन्दा पहिले उहाँसँग लगभग तीन महिना बिताउँछौं। ”
जब फाबिन्होका अभिभावक भेट्न आउँदछन्, उसको घर रमाइलो र आनन्दले भरिपूर्ण हुन्छ। फेबिन्होलाई आफ्नो आमाले विशेष गरी तयार पारिएको मासु लसाग्ना खान मन पराउँछन्।
जब उनी इ England्ल्याण्ड आइपुग्छिन्, रोसेन्जेला जहिले पनि धेरै ब्राजिलियन खाना लिन्छन् र आफ्नो अन्तिम जन्मेको बच्चा र टावरेस परिवारका लागि रोटी बनाउने चामल, सिमी र स्टेक तयार गर्न रोक्दैनन्।
फाबिन्हो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -एजेन्ट बॉबी
रोबर्टो Firmino उपनाम प्राप्त गरेको छ 'एजेन्ट बॉबी'मोनाकोबाट लिभरपूलमा उनको ब्राजिलका हमरा फाबिनोको सम्भावित स्थानान्तरणलाई मनाउनको लागि उनका सूक्ष्म प्रयासहरूको स्वीकृति। यस अनुसार Firmino, ...
"हामी फेब्रुअरीमा खेल्दा फेबिनोले मलाई कुरा गर्यो। पछि, उनीसँग लिभरपूलको बारेमा मेरो राम्रो कुराकानी थियो र तुरुन्तै मैले "
Firmino फ्याँकिङ, जीवनभर लिभरपूलको व्याख्या गर्न को लागी जिम्मेवार छ, सर्वोत्तम क्षेत्रहरु लाई लाइभ गर्ने, कसरी क्लबले काम गर्यो, कसरी यो क्षेत्रको मान्छे हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले फेबिनोलाई कसरी घर खरीद गर्न घर दिए। धेरै प्रशंसकहरूलाई, Firmino अर्को जर्जी मिन्डेस हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Finnho बचपन कहानी प्लस अनउठाएको जीवनी तथ्यांक पढ्न को लागी धन्यवाद। LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईले केहि देख्नु भयो जुन यस लेखमा ठिकै लाग्दैन भने, कृपया तपाईको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.